Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Otu nwụrụ, ọtụtụ na-efu na ọdachi ụgbọ mmiri abụọ na India
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • India na -agbasa ozi ọma • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ ndị mmadụ na-efu mgbe ha kwọsịrị ụgbọ mmiri isi abụọ na Majuli, India.
Ụgbọ mmiri ndị njem abụọ na-akụkọta ihu n'ihu n'India.
Ụgbọ mmiri nke obere ndị njem na -ekpu na nkwekọrịta nke India.
Dịkarịa ala, otu onye njem ụgbọ mmiri nwụrụ na ọdachi.
Ụgbọ njem ụgbọ mmiri abụọ bufere ibu na-aga n'akụkụ ndị ọzọ agbakọwo ihu na Osimiri Brahmaputra nke dị n'ebe ugwu nke obodo Jorhat, nke dị na steeti Assam nke ugwu ọwụwa anyanwụ India, taa.
Kọrọ, enwere ihe karịrị mmadụ 100 n'ụgbọ mmiri, ebe ọtụtụ n'ime ha ka na -efu ma na -atụ egwu ịnwụ.
Ihe onyonyo na -agagharị na ntanetị na -egosi nnukwu ụgbọ mmiri buru ibu, nke bu ndị njem yana ọtụtụ ụgbọ ala, na -akụda n'ime obere ụgbọ njem.
Nta uzo kpuru kpom kpom kpom kwem, na -aga n'ime mmiri n'ime sekọnd ole na ole ihe mberede ahụ mere, ihe onyonyo na -akpaghasị anya nke onye njem nọ na nnukwu ihe ngosi ụgbọ mmiri gbara. Ndị mmadụ si n'ụgbọ na -ekpu ngwa ngwa pụta, ngwongwo ha na -ese n'elu mmiri.
Enweghị ozi ọ bụla gbasara ndị nwere ike igbu.
A na -ejikarị ụgbọ mmiri eme njem n'ụgbọ njem India. Ihe ọghọm ụgbọ mmiri bụ ihe a na -ahụkarị n'ihi oke mmadụ karịrị akarị na adịghị mma nlekọta yana ụkpụrụ nchekwa.